Halkan fal caawiye annaga isdiyaarinya qaar ka tan su´aal sida annaga marar badan fal caawiya ku qasbanaa dhexmar sannad ka har mashruuc TAKK sida luqad.
Isaga sida fal caawiye xagga jawaab iyo su´aalha sannad;
Qorshe sheef sidaTAKK ka luqad/
Fil. Mag. Specialpedagogik/
Xisbiga dhexe sida iskuulka horumaritisa
Suaalooyin iyo jawaabo
Waxaan kula hadlay faro luqada swedhishka iyo kuna hadlay afka hooyo bilooyin badan lakiin caruurta waxay kaliya ku hadlaya swedhishka. Ma dhici kartaa in uu barto mar un afka hooyo?
Dhamaan caruurta waxay u baahan yihiin in ay maqlaan oo ay adeegsadaan afka hooyo inta badan si ay u bartaan. Waxaa dareemaysaa si hubaal ah in caruurta fahmayso waxa aad afka hooyo ku dhahaysid kadib waxaa cadaanaayo in afka hooyo horumaray. Sii wad in aad faraha kula hadasho oo afka hooyana iyo adeegso si wadajir ah caruurta si cayaar ah (ayadoo hees ah, qaafiyo, ama sheekooyin). Ku dheero gali caruurta marmar in dhahaan waxay rabaan luqado badan tusna in aad jeclaatay markii caruurta ay adeegsato afka hooyo.
Canugayga waa tuuraayaa sawirka oo aan tuso isaga. Maxaan sameeyaa si uu uxiiseeyo sawirada?
Caruurta waa ay muujin doontaa xiiso hadii adiga iyo qoyska adeegsato sawiro si aad sheeko ugu sheekeeso ayaga. Isla sida ay caruurta ay xiiso ugu qaadaan luqada lagu ay ku hadlaan qoyska, hadii ay caruurta xiiseeso fara ka hadalka, sawiro ama isgaarsiin kale oo idinka adeegsanaysaan guriga ku dhaji sawirada ama kaartada sawirka meeshaan aad oga baahato ( qolka fadhiga, daarada ama suuliga) kadibna farta ugu fiiq sawirada markii la hadlaysida caruuta sida waxa aad sameeneesid lakiin xitaa markii adiga shaqsiyan aad rabto in aad ugu sheekeeso waxa aad sameesay ama aad ku fikiraysid.
Waan bartay faro ka hadalka swedhishka lakiin waxaan aqristay hada in la awoodi karo faro ku hadalka swedhisha loona adeegsan karo afkooda hooyo. Dhibaatada waxay tahay in ay igu adag tahay in ku hadlo afkeyga hooyo si wadajir swedhishka faro ku hadalkiisa! Maxaan sameeyaa aniga?
Waa fududahay in la barto lana adeegsado swedhisha faro ku hadalkiisa wadajir afka hooyo hadii la adeegsan karo afka hooyo bilowga. Lakiin waxaa suurtogal dhab ah in bilowga la adeegsado afkaaga hooyo wadajir fara ka hadalka swedhishka xitaa marka danbe. Ka fikir oo sare uqaad marka hore afka hooyo weedhooyinka ama ereyada oo aad adiga rabto kaalmeeso fara ka hadalka. Markaa waad ogtahay waxa la kaalmeenayo kadibna gali fara ka hadalka waxa aad ratbo in aad tiraahdo. Ka bilow erayo qaarkood marka hore kadibna samee maalin walba waxaa imaanayso ee waqti kadib in aad awood uyeelato luqadii aad rabto in aad u adeegsato fara ka hadalka swedhishka!
Ma dhici doontaa in canugayga marnaba aanay hadlin hadii bilaabo AKK iyo TAKK?
In la adeegsado AKK iyo TAKK sinaba ma ugu hor istaagayso in caruurta bilowgaba ay ku hadasho luquda. Waabay ka caawinee AKK iyo TAKK oo waliba waxayba ubilaabaysaa caruurta sidii luqadooda u hormari lahayd, maadaama caruurto aanay kaliya ka maqlayn dhagaha luqad lagu hadlo xitaa ay udheer tahay in ay helaan kaalmo dheeraad ah ayadoo fiirinaya sawiro, fara ka hadal iyo hab kale isu muujiyaan. Hadii canugaada uu awood u leeyahay in uu barto luqad uu ku hadlo waa uu samayn doonaa tani, lakiin ayadoo la adeegsanayo AKK iyo TAKK waxaad ugu fududayneesaa canuga hormarkiisa luqad si uu labadaba waxna u fahmi karo hadana shaqsi ahaantiisa isgaarsiin u samayn karo dunida inteeda kale, taaso la oran karo in ay tahay lagama marmaan si loo hormariyo luqada
Ma dhici doontaa miyaa in canugayga uu ku jahwareero labadaba fara ka hadalka iyo luqada af ku hadalka labo luqadood?
Maskaxdeena waxay usameesan tahay in y maareyso luqado faro badan, hadana cilmi baarista waxay cadeeyeen in ay khuseyso caruunta luqadaha badan leh oo hadana leh xanibaad shaqada maskaxda oo halis ah. Caruurta luqadaha badan leh waa ay qaybiyaan ama faafiyaan afkooda hooyo. Waxaa loo baahnaan karaa in la adeegsado erayo/fara ka hadal kala duwan luqadahooda kala duwan, maadaaama ay ku hadlyaan/adeegsanayaan marxalado kala duwan.
Maloo adeegsan karaa isla hal fara ka hadal labo luqadood?
Haa waayo, xitaa hadii luqa fara ka hadalka oo laga soo deensaday fara ka hadalkii waa ay kala duwanaan kartaa wadama kala duwan, aad bay u wanaagsan i loo adeegsado fara ka hadal swedhishka caruurta luqadahooda kala duwan. Waa sweden caruurta waxa ay isgaarsiin kula sameeneeso dadka heeraarsan. Xusuusnow kaliya markii adiga waalidka ama qof kale ehel ah in aad barato fara ka hadalka, in ku tiraahdo luqadaada. Hadaa fara ku hadlka ku bara swedhishka isla markaas hada ku tiraahdo ereygiii swedhishka ahaa, waa ay ku adkaan kartaan sidii ay u sameen lahaayeen fara ku hadalka iyo in ay ku dhahaan afka hooyo.
Maxay u sahlan tahay marka laga hadlyo TAKK + luqad lagu hadlo marka loo eego kaliya luqad lagu hadlo?
Sidaa awgeed in faraha lagala hadlo waxay ay xoojinaysaa oo ay qeexeeysaa waxa la leeyahay. Caruurtii waxay helaysaa taasoo aqoon luqad ahaan ah labadaba ayadoo ay dhagaha ka maqlayso luqada lagu haldo, iyo ayadoo indhaha ay ka arkeeso fara ka hadalkii. Waxaa dheeraad ah in fara ka hadalka uu ka fudud yahay in la fahmo maadaama loo baranaayo gudo ahaan oo loo turjumanayo gabi ahaan. Markii la maqlo erayga `ilig` waa in la fahmaa dhawaaqa luqada ku jira si loo kala saaro erayga tusaal ahaan erayga `carro` fara ka hadalka ereyga ílig´ ayaan la kala qeebin karin una baahneen in baaris lagu sameeyo oo si toos ah loo fahmi karo. Markaa caruurta midi waxay awoodi karaan in ay adeegsadaan labadaba maqalka iyo aragtida marka uu qof la la hadlaayo oo adeegsanaya TAKK, markaa caruurta waa ay u fududahay ereyga fara ka hadalka, taasoo iyadana markeeda usii fududeenayso in ay caruurta barato ereygii hadalka ahaa.
Maxaan sameeyaa hadii caruurta hore u adeegsanayso fara ka hadal u gaar ah?
In caruurta adeegsaneeso fara ka hadal u gaar ah waa ay fiican tahay un, maadaama ay muujinayso in caruurto rabto in ay xiriir la sameeso oo ay isgaarsiin la dadka hareerahooda ah. Ha badalin caruurta fara ka hadalkooda xitaa hadii ka duwan tahay mida la adeegsado TAKK. Hadba caruurta da´dooda iyo sida ay baahi ugu qabto isaga/iyadda waxay noqon doontaa ahaanaysaa in ay adeegsato TAKK ilaa intee ayaa lagu tijaabin karaa oo la tusi karaa TAKK oo la adeegsado. Caruurta maku xirnaan doonaa TAKK muhiin ma tahay in ay caruurta isgaarsiin kula samayso qaar kale adeegsada TAKK, taasoo noqon karta in ay adkaato hadii lahaysto kuwa badan fara ka hadal gaar ah.
Ma in la hadlaa mar walba hadii la adeegsanayo fara ka hadal?
Hadii canugaada uu wax maqlayo waa muhiim intiiba ay suurtogal tahay in isgaarsiin lagu sameeyo isla sidii ay qaar kale. Hadana waxay u tahay caruurta caawinaad in ay maqlaan ay arkaan waxa aad ku oranaysid. Markaa waa u sahlan tahay caruurta in ay turjumato waxa aad ku oraneesid. Hadii ay ku adag tahay caruurta in ay fahamto inta badan in la sii wado fara ka hadalka. Taasoo aan laga yeeli karin erayga lagu hadlo, lakiin waxaa lagu qasban yahay in lagu celceliyo.
Xaq ma uleeyihiin ardayda dugsidaga hoose dhexe afkooda hooyo iyo macalin ugu turjuma afkooda hooyo maadooyinka ay dhigtaan?
Sida qaynuunka u dajisan arimaha iskuul qeybta 5 qodobka 4 qodobka ku xiga 7 dhamaan ardayda nooca doono iskuul ha noqdeen waxay xaq uleeyihiin afkooda hooyo iyo caawinaada turjuma maaddada ee afka hooyo.
Qaynuunka iskuul 2011:185
Xaq ma u leeyihiin ardayda dugsiga sare afkooda hooyo iyo macalin ugu turjuma afkooda hooyo maadooyinka?
Maka loo eego qaanuunka dugsiga sare qeybta 4 qodobka 14 dhamaan ardayda xaq ayey u leeyihiin afkooda hooyo iyo sida qeybta 9 qodobka 9 xitaa dhamaan ardayda ay baahi ay u qabaan caawinaada turjimada maaddada afkooda hooyo xaq ayay uleeyihiin
Qaanuunka dugsiga sare2010:2039